Umnikazi wesakhiwo kufuphi nefa le-18 inkulungwane eShchors: "Ndandibambelele kwimeko" - HienaLouca
Umnikazi wesakhiwo kufuphi nefa le-18 inkulungwane eShchors: "Ndandibambelele kwimeko"
Julayi 11, 2018 Dianne Reeves I nkcubeko, iindaba
Abaqashi bavakalisa ingqalelo kwisakhiwo sokwakhiwa kwengxabano ecaleni kwekhulu le-18 leminyaka yeKreptovichi manor. Umnini wesakhiwo uDmitry Shanya emva kokukhululwa izinto ezidlulileyo Inkululeko yazisa isikhundla sakhe. Uthi wenza konke ngokuya komthetho, kodwa unqamisile isakhiwo sokwakha kude kube ngoku.
Ukwakhiwa kwesakhiwo esisigxina sezakhiwo senziwa kwintsimi ye-Shchors kwindawo yokuhlala kwidolophana yaseSkrrsy, kwisithili saseNovogrudok.
Yintoni ebandakanyiweyo kwi-agro-community "Shchors"?
Inkcaso ngoku iqukethe izinto ezine. Le yindlu yokuhlala ("indlu yathisha" yabuyiselwa), ibhagi (yangaphambili yamanzi), ibhagi, i-gazebo evulekileyo (esanda kwakhiwa). Eyesibini ibhekisela ekhishini lasehlobo. Yakhelwe kwindlu yasemaphandleni endala evela kwidolophana engumakhelwane, eyachithwa kwaye yathunyelwa apha.
Аграсийсяззба "Щорс" kwisicwangciso
Ukongezelela kwinkimbinkimbi yezakhiwo, indlu yilezi ze-25 iihektare zomhlaba. Iindawo eziqingqiweyo.
Agriturismo kuthatha abakhenkethi ukuba ubusuku, vula iindwendwe befuna ukuhlola ukuqokelelwa emifanekiso izinto zobomi iindwalutho, ziqhutywa iziganeko yenkcubeko apho. Le ndlu ukulungiswa igumbi ka-Adam Mickiewicz, uJan Chechot, Guard uNapoleon ngayo ngokrolo kunye neemephu yexesha yakuqala, ezindongeni eziwileyo lithographs ezinde of Belarus.
Elinye lamagumbi e-agritourism "Shchors"
Yintoni umnini aphula?
UDmitry Shanya uthi akazange aphule nantoni na, kwaye uyamangalisa ukuba kufuneka aqikelele kule meko. "Indlu yothisha" (isetyenziselwa ukuhlala ootitshala beedolophana) kunye nezakhiwo zasekhaya kunye nentsimi eyayiyo, wathenga ngonyaka we-2015 uvela kubantu ngabanye. Indlu yayingeyona nkcubeko kunye neenkcubeko. Iprojekthi yokwakhiwa kwayo yavunywa kwiKomiti yeSigqeba yeSithili seNovogrudok ehlobo lase2016.
Iprojekthi yokwakha kwakhona indlu yokuhlala
Kulo nyaka ngoMeyi, ikomiti yesigqeba yengingqi ivumelene kwiprojekthi yesakhiwo esitsha-ikhitshi ehlobo, apho kucetywayo ukubonisa izinto zenkcubeko yabantu.
Iprojekthi yaseKhaya yeSikolo
Umnikazi welifa uthi akukho mntu ufune ukuba aququzelele iiprojekthi kunye noMphathiswa weNkcubeko okanye amanye amaziko. Ngaphandle koko, wayenokwenza.
Kutheni na ke ama-activists athukuthele?
Ngapha koko, isakhiwo intsha ukuba kufuphi kwithala leencwadi odumileyo Hreptovichey, nto leyo eyinxalenye ebhotwe, apake iigrafu ezintsonkothileyo Hreptovichey kwinkulungwane XVIII - ixabiso kwimbali nenkcubeko. Umgama ukusuka kwilayibrari malunga neekhilomitha ezili-10.
Agrosound - ummelwane osondeleyo webhotwe kunye nepaki ezinzima
Ummandla ojikeleze udidi oludala kufuneka ukhuselwe nguRhulumente. Kodwa apho imida yayo idlulayo, ayifani ngokucacileyo, kuba indawo zokukhusela ngezizathu ezithile azichazwanga. Le yimeko eqhelekileyo eBelarus, xa kukho iindawo ezikhuselekileyo zokhuselo. Ngoku kukho inkqubo yophuhliso lwabo nokuvunywa.
Njengoko kwathethwa ngaphambili kwi-Freedom architect-umbuyiseli WaseRoma Zabello, ukwakha okanye ukuyila izakhiwo ezisongela ukugcinwa kwezinto ezingasuswayo zenkcubeko kunye nezenkcubeko, ngaphandle kwencazelo yendawo yokukhusela (i-105 ye-Code of Culture).
Ngoko uxolelanisa njani indawo yokwakha kunye nezokhuseleko?
UDmitry Shanya ukholelwa ukuba le meko iye yaphuhliswa ngenxa yokuchazwa kweendlela ezahlukeneyo zeNkcubeko.
"Kwakungekho nambuzo kimi kwiSebe leNkcubeko. Ndiyaqonda ukuba umthetho omtsha kwinkcubeko kungacacanga makenjenje ngokwahlukileyo evakalayo ukuba abasemagunyeni bathi yonke into entle, zintatheli abhale athi mhlawumbi umthetho kantu. Mhlawumbi, kodwa kungeyona nto. Kodwa akukho namnye owammangalela ngamacala. Ndaba ngumninimzi kwimeko, "utshilo umnini-mhlaba.
Umnini, ngesicelo somlomo samagunya asekuhlaleni, wamisa ukwakhiwa kwekhishini lasehlotyeni "kwaze kwacaciswa ukuba imeko kunye nobudlelwane phakathi koMphathiswa weNkcubeko kunye nekomiti yekomiti yesigqeba saseNovogrudok bacaciswa phakathi kwabo."
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-257, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
UNina Boginsky uvalelwa emva kokukhawuleza kufuphi nesakhiwo seKGB
Kuye kwaqokelelwa iisayinithi eziliwaka kwi "Lullaby" eBelarusian
I-Trump yaya eFinland ngethuba lokuhlangana kunye noPutin
Kwisakhiwo sokwakhiwa kweBelAES, umfakeli wehla esuka ekuphakameni, wabhubha
Intolongo, indoda kunye nomfazi. Ummandla wenkululeko. Akukho mfuneko
EFransi babengamaRashiya, eBelarus - ngamaFrentshi. Ibali leentsapho ezikholelwa kwiStalin
Post Previous:Isibhengezo se-NATO: "Siyakugweba ukuhlonyelwa kweCrimea, esiyize siyayiqonda"
Okulandelayo Post:ENgilani-eCroatia: jonga uphinde uphawule ngebhola elikhulu ngeNkululeko! VZHIVUYU
UGeorgia unqatshelwe umgqatswa ... (5)
I-Courtney Iditywe kwi-bikini elunxwemeni eMalibu (5)
Umbonisi weRadio Verena Kert kwi-swimsuit elunxwemeni e-Ibiza (4)